Enin-dahy voasambotry ny zandary… : zanaka ben’ny Tanàna mpangalatra taolam-paty | NewsMada
Voasambotry ny zandary, tao Antetezambaro, Toamasina II, ny talata teo ny olona enin-dahy, voarohirirohy amin’ny vaky fasana sy halatra taolam-paty. Araka ny voalazan’ny zandary, zanaka ben’ny Tanàna amina kaominina ambanivohitra, ao anatin’ny distrika Toamasina II, ny iray amin’ireo.
Saron’ny zandary avy ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava ao amin’ny toby eo amoron-dranomasina Toamasina, afakomaly tamin’ny 5 ora hariva tao Vohibendrana, kaominina ambanivohitra Antetezambaro, distrikan’i Toamasina II, RN 5, ny jiolahy miisa enina niaraka tamin’ny taolam-paty miisa 301 ka taolan-dava avokoa ny ankamaroany.
Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny borigadin’ny zandary, Rajaohasina Délson Andrien, tamin’ny alalan’ny fanomezam-baovao avy amin’olon-tsotra no nahafantarana fa misy andian’olona manana taolam-paty marobe miisa telo gony ka nahafahana nisambotra ireo mpanao trafikana taolam-paty ireo. Tratran’ny zandary teo am-pitadiavana mpividy izy ireo. Nanao ny vela-pandrika avy hatrany ny zandary taorian’ny angom-baovao rehetra. Raha ny fanazavan’ny zandary, mody mitondra gonin-tsaribao ireo mpangalatra taolam-paty ary mitovy tsara amin’ny gony misy saribao ny fomba fikarakaran-dry zalahy ny gony misy ireo taolam-paty marobe ireo. Mody fonosina ravin-javatra tahaka ny saribao ny vavan’ny gony misy ireo taolam-paty mba tsy hamantaran’ny olona hoe taolam-paty ny ao anaty gony.
Roa lahy mpihady fasana…
Noraisim-potsiny ireo jiolahy miisa enina taorian’ny vela-pandrika nataon’ny zandary. Isan’ireo voasambotra ny zanaka ben’ny Tanàna ao amin’ny kaominina ambanivohitra distrikan’i Toamasina II sady mbola tsy ampy taona rahateo ity ankizilahy ity satria vao 17 taona monja. Mpanera kosa ny telo hafa ary avy any Mahanoro ry zalahy ireto. Fantatra kosa fa tena tompon’ireo taolam-paty ireo ny jiolahy roa sady manam-pahaizana amin’ny fangadiana fasana nangalarana ireo taolam-paty marobe.
Nogiazan’ny zandary avy hatrany ireo taolam-paty tratra tany amin’ireto jiolahy ireto. Mitohy kosa ny famotorana ireo jiolahy. Nanamafy ny zandary fa tsy mbola nisy fitarainana trangana vaky fasana voarain’izy ireo.
Mirongatra ny halatra taolam-paty ary tsy vao izao fa efa hatry ny ela. Maro ireo mpanao trafika efa tratra tamin’ity halatra taolam-paty, saingy tsy mbola nandrenesam-baovao marina hoe hatao inona ireny taolam-paty ireny sy/na iza ny ambadik’ity raharaha ity. Mijanona amin’ny tombana sy ny honohono fotsiny sisa ny an’ny mpanara-baovao ny momba ireny taolam-paty ireny.